Ukusesha Kwegama Lesizinda | Martech Zone
Ungalithenga Kanjani Igama Lesizinda
NgoMsombuluko, Mashi 29, 2021 ULwesine, April 1, 2021 Douglas Karr
Uma uzama ukuthola igama lesizinda lokufaka uphawu lomuntu siqu, ibhizinisi lakho, imikhiqizo yakho, noma izinsizakalo zakho, iNamecheap inikeza usesho olukhulu lokuyithola:
Thola isizinda esiqala ku- $ 0.88
Inikwe amandla yi- Namecheap
Amathiphu Ngokukhetha Igama Lesizinda
Nayi imibono yami ngokukhetha igama lesizinda:
Okufushane kungcono - isizinda sakho sifushane, lapho kukhumbuleka kalula futhi kulula ukuthayipha ngakho zama ukuhamba nesizinda esifushane. Ngeshwa, izizinda eziningi ezingaphansi kwezinhlamvu eziyi-6 sezigcinwe isikhathi eside. Uma ungakwazi ukuthola igama elilodwa, elifushane, ngizozama ukugcina inani lamaqoqo namagama lilinganiselwe… futhi, ukuzama ukuhlala ngikhumbuleka. Njengesibonelo, Highbridge yathathwa yonkana nezizinda ezisezingeni eliphezulu, kepha sasiyinkampani yokubonisana ngakho ngakwazi ukuthenga zombili Highbridgeukubonisana kanye highbridgeabaxhumanisi… amagama wesizinda amade anamaqoqo amaningi, kepha angakhohlwa ngoba kukhona amagama amabili nje.
Ama-TLD ahlukene ayamukelwa - Ukuziphatha kuyaqhubeka nokushintsha maqondana nabasebenzisi abakwi-Intanethi kanye nokusebenzisa kwabo amagama wesizinda. Ngenkathi ngithatha isizinda esisezingeni eliphakeme .zone, abanye abantu bangeluleka ukuthi ngiqaphele… ukuthi abantu abaningi bangayethembi leyo TLD futhi bacabange ukuthi ngangiwuhlobo oluthile lwesayithi elibi. Ngiyikhethe ngoba ngifuna i-martech njengesizinda, kepha wonke amanye ama-TLDs asevele ethathiwe. Ngokuhamba kwesikhathi, ngicabanga ukuthi bekuyisinyathelo esihle futhi ithrafikhi yami isiphezulu ngakho bekufanele ingozi. Mane ukhumbule ukuthi njengoba othile ethayipha isizinda ngaphandle kwe-TLD, kukhona ukuhleleka kwemizamo ... uma ngithayipha i-martech bese ngishaya ukungena, i-.com izoba umzamo wokuqala.
Gwema amakhonco - gwema amakhonco lapho uthenga igama lesizinda… hhayi ngoba lingemihle kodwa ngoba abantu bayabakhohlwa. Bazohlala bathayipha kusizinda sakho ngaphandle kwabo futhi kungenzeka bafinyelele kubantu abangalungile.
Keywords - kunezinhlanganisela ezahlukahlukene ezingaba nengqondo ebhizinisini lakho:
Indawo - Uma ibhizinisi lakho lizohlala liphethwe futhi liqhutshwa endaweni, ukusebenzisa igama lomuzi wakho egameni kungaba yindlela enhle yokuhlukanisa isizinda sakho kwabancintisana nabo.
Brand - Imikhiqizo ihlala inenzuzo ukuyisebenzisa ngoba imvamisa ipelwa ngokuhlukile futhi kungenzeka ingathathwa.
Isihloko - Izihloko zingenye indlela enhle yokuzihlukanisa, noma ngophawu oluqinile. Nginamagama amancane wesizinda semibono yephrojekthi yesikhathi esizayo.
Ulimi - Uma kuthathwa igama lesiNgisi, zama ukusebenzisa ezinye izilimi. Usebenzisa igama lesiFulentshi noma iSpanish egameni lakho lesizinda kungangeza i-pizazz ethile kukwenza uphawu lwebhizinisi lakho lonke.
Kuthiwani Uma Isizinda Sakho Sithathwa?
Ukuthenga nokuthengisa amagama wesizinda yibhizinisi elinenzuzo kepha angicabangi ukuthi kungukutshalwa kwemali okuhle kwesikhathi eside. Njengoba ama-TLD amaningi aya ngokuya etholakala, ithuba lokuthenga isizinda esifushane ku-TLD entsha liya ngokuba ngcono futhi liba ngcono. Ngokwethembeka konke, angizazi ngisho nezinye izizinda zami njengoba ngake ngenza futhi ngangizidedela ukuba zihambe ngamasenti kudola namuhla.
Kodwa-ke, uma uyibhizinisi eliqinile ngokuthenga isizinda esifushane esivele sithathiwe, iningi lenzelwa ukubhida nokuthengisa. Iseluleko sami ukumane ubekezele futhi ungahlanyi kakhulu ngokunikezwa kwakho. Ngixoxisene ngokuthengwa kwezizinda eziningana zamabhizinisi amakhulu ezazingafuni ukukhonjwa ngazitholela ingxenye encane yezindleko umthengisi ayezicela. Ngiphinde ngihlale ngibheka ukubona ukuthi iziteshi zenhlalo ziyatholakala yini nokuthi zingagcinwa. Uma ukwazi ukuthola i-Twitter yakho, i-Instagram, i-Facebook, nezinye iziteketiso zenhlalo ukufanisa isizinda sakho, leyo yindlela enhle yokugcina umkhiqizo ohambisanayo!
Ukudalula: Le wijethi isebenzisa umazisi wami wobulungu we Namecheap.
Kusebenza Kanjani Ukukhangisa? Yini Eyenza Abantu Bathenge?
Amathrendi Wokumaketha: Ukukhuphuka kweNxusa noMdali Isikhathi